तराईमा अब लकडाउन गरे पनि नियन्त्रण हुँदैन कोरोना : डा. अनुप बास्तोला - Yatra Daily
Home Headline तराईमा अब लकडाउन गरे पनि नियन्त्रण हुँदैन कोरोना : डा. अनुप बास्तोला
स–साना रोजगारीका लागि प्रभावित क्षेत्रबाट उपत्यकामा नियमित मानिसको प्रवेश भइरहेको छ । यसलाई रोक्न सकिएको छैन । उनीहरू कहाँ, कसरी र कोसँग बसेका छन्, तथ्यांक हामीसँग छैन । कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट आएका मानिसलाई रोक्न सक्नुपर्छ । पिसिआर नेगेटिभ आए पनि उनीहरूलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । लकडाउन गरेर एक–अर्कामा हुने संक्रमण रोक्न सके केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । काठमाडौंभित्र पनि परीक्षण बढाउनुपर्छ । साभार nayapatrikadaily.com बाट
Next articleएअर इन्डिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना: दुई चालकसहित १७ जनाको मृत्यु